Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń ⋗ Thư viện
Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń Lĩnh vực hoạt động Số điện thoại Email Bài viết Xem thêm ☰
Trang Chủ » Dịch vụ công và Dịch vụ nhà nước » Thư viện » Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń
Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń
Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Số hotline 959692664468
Liên hệ qua minhtoowaiyan1996@gmail.com. Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Bài viết về Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń
MI(Xiaomi) ဖုန်းတစ်လုံး စတင်အသုံးပြုသူများ ကြုံတွေ့ရတတ်သော အဆင်မပြေမှုလေးများကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများနှင့်​
MIUI အ​ကြောင်း ==============
- Facebook ကနေ Mes...sage ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Messenger တက်မလာတာ သို့မဟုတ် Messenger popup တက်မလာတာ
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> Installed App >> Messenger >> Permission Manager >> အောက်ဆုံးက Display Popup Window ကိုအမှားလေးဖြုတ်လိုက်ပါ - Zapya ကချိတ်လို့ရပြီး ဘယ်ကိုမှပို့လို့မရတာ
ဖြေရှင်းရန် - Security Application ကိုရှာပါ Data Usage >> Restrict Data Usage >> Zapya ကို Data ရော WLAN မှာပါ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ - Software တစ်ခုခုသွင်းတော့မယ်ဆိုရင် Allow လုပ်ခိုင်းဖို့ စက္ကန့်တွေ စောင့်ဆိုင်းနေရတာ
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> Additional Setting >> Privacy >> Unknown Sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ - Developer Option မတွေ့တာ
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> About Phone >> MIUI Version ကို ခုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ - Download Size ပြသနာတက်ပြီး မဒေါင်းပဲရပ်နေတာ
ဖြေရှင်းရန် - Download Application ကိုရှာပါ အပေါ်ဘက်ထောင့်ရှိ အစက်လေးသုံးစက်မှ တစ်ဆင့် Setting ကိုဝင်၍ Download Size Limit ကို Unlimited ထားပေးပါ - Ringtone ပြောင်းရန်မတွေ့တာ
ဖြေရှင်းရန် - (၁) Setting >> Sound and Vibration >> Phone Ringtone>> အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ - Screen ကိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင် Home Screen ရဲ့ Menu ကိုရောက်သွားပြီး လက်သုံးချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင်တော့ Home Screen Preview ကိုရောက်သွားမှာပါ - ကင်မရာကိုဖွင့်ထားပြီး Home back menu ခလုတ်သုံးခုထဲက menu ခလုတ်ကိုဖိထားရင် Camera setting ကိုမြင်ရမှာပါ။ Dial Pad ကိုဖွင့်ထားပြီး နှိပ်ရင် Call Setting .. Message ကိုဖွင့်ထားပြီး နှိပ်ရင် Message setting စသဖြင့် မြင်ရပါမယ်။ - Second Space ဆိုတာက ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲ ၂ လုံးပုံစံ ခွဲထားတာပါ။ သီးခြားကန့်သတ်မှုတွေလုပ်လို့ရသလို Password ခံထားလို့လည်းရပါတယ်။ မလိုချင်တော့ရင် Second Space ကိုပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ် - Dual app ဆိုတာက App တစ်ခုကို ၂ ခုဖြစ်အောင်ပွားသုံးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ SIM နှစ်ကတ်သုံးထားလို့ VIber ၂ ခုဖွင့်ချင်တာ Messenger နှစ်ခုသုံးချင်တာ Facebook အကောင့် ၂ ခုသုံးချင်တာ တွေအတွက် လည်းအဆင်ပြေသွားစေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါ - ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အသစ်လဲရင် Data တွေပျောက်မှာ မစိုးရတော့ပါဘူး။ Setting တွေကအစ အကုန်လုံး ဟိုဘက်ဖုန်းအသစ်ဆီ လက်ရှိအတိုင်း Transfer လုပ်ပစ်နိုင်မယ့် Mi Mover က Setting ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ - ပုံကို Hide လုပ်မိလို့ ပျောက်သွားသူတွေအတွက်က Gallery ကိုဖွင့်ပြီး Menu Key ကိုနှိပ်ထားကာ Setting ခေါ်လိုက်ပါ။ အဲထဲမှာ Show Hidden Album ကိုပြလိုက်ရင် ကိုယ့်ပုံတွေ ရေးရေးပေါ်ပါပြီ ဖိထားပြီး Unhide လုပ်ပါ။ - Videos နဲ့ photos များကို Mi File Managerထဲမှာ Lock နဲ့ထည့်​လို့ရပါတယ်​။
Pattern ဒါမှမဟုတ်​ Finger print ကိုသုံးပြီး
Lock ဖြည့်​လို့ရပါတယ်​။Mi File Manager ထဲကိုဝင်​ပါ။ Recent Categories Storage ဆိုတာ​တွေ့ပါလိမ့်​မယ်။ ကြိုက်​ရာ တစ်​ခု​အောက်​မှ လက်​ဖြင့်​​အောက်​သို့ ဆွဲချလိုက်​ပါ။ Lock ကို​တွေ့ ပါလိမ့်​မယ်​။ video များ photo များ files များကို hide နိုင်​ပါတယ်​။အခြား message note gallery များကိုလည်း အဆိုပါ နည်းအတိုင်း hide နိုင်​ပါတယ်​။ သင်ဟာ Mi ဖုန်းအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဆိုရင် Share ပြီး သိမ်းထားသင့်တယ်.. ☺ Baisc --> Reboot ဘယ်လိုဖုန်းကိုပိတ်လို့ရတယ်
၁။ power button ခဏလေးမိထားမယ်ဆိုရင်
select reboot လေးရွေးနှိပ်ပြီးမယ် ၂။ power button လေးကိုနှိပ်ထားမယ်
ဖုန်းပိတ်သွားတဲ့အထိ အဲ့လိုလေးလဲရတယ် how to change device name?
============= ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ ဖုန်းနာမည်ပြောင်းမယ်
၁။ ဖုန်း device setting , tap About phone ,device name ... အဲ့မှာကိုယ်ပေးချင်နဲ့နာမည်လေးပေးလို့ ရပါပြီဗျာ။ ဖုန်းကိုပိတ်ထားမယ် ဖွင့်ရင်power key နဲ့ ပဲအသုံးမပြု ချင်ဖူးဆိုရင် volume keys ရောအဆင်ပြေပါတယ်။
အဲ့လိုဆိုရင် screen on ရင် power key မှ မဟုတ်ပါဘူး volume key နဲ့လဲ အဆင်ပြေပါပြီ how to enable the developer options?
၂။ Tap on MIUI version tap7times.
၃။ go to your device's settings > Additional settings to find the Developer options တွေ့ပြီပေါ့နော်။ Browser
အင်တာနက် အပိုင်း homepage နဲ့ startup page
ကျန်ကျောင်းစာ တွေနဲ့မမြင်ချင်ဘူး ကိုယ်လဲနားမလည်ဘူးလေနော်။
အဲ့တော့ g00gle ကြီးပေါ့နော်။ ၁။ Open the browser app. ဖွင့်မယ်
g00gle လာ baidu , yahoo, ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ဟာ မိမိသဘောပေါ့။ how to quickly switch between opened tabs?
၄။ you can now swipe from the left and right. အဲ့တော့ tap ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ page ကို left ,right... ရွေးလိုရပြီပေါ့နော်။ How to switch to night mode?
အဲ့ဒါလေကတော့ ညအိမ်ရာထဲမှာ အသုံးပြု ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ How to close all tabs?
အဲ့ဒါလေးလဲမဆိုပါဘူး How to enable reader mode?
3. Tap the reader mode button in address bar . စာအုပ်ပုံ logo လေးနဲ့ အဲ့မှာနှိပ်လိုက်မယ် အဲ့လိုဆိုရင် အမြင်ပြောင်းသွား edit, လေးမျိုးရှိသေးတယ် အထဲမှာ theme setting ပြောင်းမယ် font settings စာလုံးကြီးမယ် သေးမယ်။ add bookmark မှတ်ထားမယ်။ နောက် recent ထဲမှာ add to home scree , V/H screen , Nightmode, exit. အဲ့ဒါလေးတွေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Buttons
3. To re-enable the navigation buttons, top the Buttons toggle again. or double-tap any one of the navigation buttons. ဖုန်းအပေါ်ကနေဆွဲလိုက်မယ် MIUI 8 မှာ
ကယ် adjust ကိစ္စထက်ဆက်မယ်။ How to adjust and turn off the navigation button backlights?
အဲ့ဒါလေကတော့ Button lights မီးလေးလင်းချင်တဲ့သူတွေ on , off လုပ်လိုရမယ် နောက်ထက်ပြီးတော့ Long press Navigation buttons. buttons သုံးခုရှိတယ် ဟုတ်တယ်နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ back key ကို long press ကို close current app နဲ့သုံးတယ် faceb00k သုံးနေတယ်ဆိုပါစို့ back key ကို long press နှိပ်လိုက်ရင် တခါထဲထွက်သွားမယ် ပိတ်သွားမယ်။ အဲ့လိုလေးပေါ့ဗျာ။ ကယ်နောက်တစ်ခု အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းကိုယ် game app သို့မဟုတ် video palyer အသုံးပြု တယ်။ button keys.. တစ်ခါထဲပိတ်ထားနိုင်တယ်ဗျာ။ ခဏခဏ ရွေးစရာမလိုဘူးလေနော။ How to disable the navigation buttons automatically when usingaspecific app?
3. select always disable. ရွေးထားလိုက်ရင် okay ပေါ့ဗျာ။ Camera
camera setting တော့ ကိုယ်ဟာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်နော်။ ကျွန်တော် video edit အပိုင်းအရင်လေ့လာနေသေးတယ်။ camera အပိုင်း မရောက်သေးလို့ How to use your voice to take picture ?
ကိုယ်ပေးချင်နဲ့ အသံ မိမိသဘောပေါ့နော်။ effect အပိုင်းကိုယ်ဟာကိုနည်းနည်းလေးလာကြည့်ပေါ့နော်။ Contacts
2. select the contacts you want to delete, and then tap delete. နောက်တစ်ခု ကိုယ့်ပါရမီဖြည့်ဖက် သို့မဟုတ် ချစ်ချစ် သို့မဟုတ် အမျိုးတွေ နံပါတ်ကို ringtone အတွက် How to setaunique ringtone foracontact?
နောက်တစ်ခု sim card contacts အပိုင်း Show my sim card contacts
2. slide the hide incomplete numbers switch to the on position. . နောက်ပြီးတော့ root တာရော မrootပဲ မြန်မာစားနဲ့ g00gle play store အဆင်ပြေအောင် xiaomi phone တွေ power အဲ့လောက်မနည်းပါဘူး။ coc game ကစားလို့ရတယ် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး samurai seige ကိုကစားကြည့်ပါ graphic ဘယ်လောက်ကွာလဲ ထားပါလေ နောက်မှ.......... specificationအကြောင်းတွေထက်ဆွေးနွေးမယ်ဗျာ။ ဘယ်သူဟာပိုပူလဲ Cpu အပိုင်း battery အပိုင်း။ ကယ်ဗျာ စကားလုံးတွေရှည်ကုန်ပြီ။ စာဖတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အသုံးပြု ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ Clock
ကိုယ်ထားချင်တဲ့အသံ အတိုးအကျယ်ပေါ့နော်။ How to remove the alarm automatically after it goes off?
1. For non -repeating alarms, you can go to their own settings to turn on the delete after goes off switch. How to set an alarm?
Alarm label လေးနဲ့ နာမည်ပေးထားလို့လဲရတယ်ဗျာ How to change the snooze duration?
ရေကူးပြိုင်မယ် timer လေးနဲ့ပေါ့နော်။ How to addapredefined timer?
အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ File Explorer
3. Open the folder you want the copied items to be saved, and then tap Paste. Explorer ဖွင့်လိုက်မယ်
Recent, ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ ပြမယ်။ Categories, ကိုယ်ဘယ်ဟာကိုအသုံးပြု မလဲ
3. Tap the Menu button > Create new folder. အပေါ်ကစာမှာ Storage tab .
ပြီးတော့ How to move files or folders?
ကိုယ်ပြောင်းရွေ့မဲ့files ကို internal storage ကနေ SD card လုပ်တဲ့ပုံစံပါ။ အဲ့ဒါကတော့ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်တယ်။ Gallery
2. Open the Toggle panel from the top of the screen, tap the screenshot button. အဲ့လိုscreenshot လုပ်မယ် MIUI 8 မှာထူးခြားမှု့လေကတော့ တော်တော်များများသိပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ screen အလင်းမြင့်ပေးတဲ့ဗျာ။ How to hide and unhide album.
အောက်ကိုဆွဲချမယ် lockပုံလေးနဲ့ပြမယ် hidden album အဲ့မှာ ဖော်ပြမယ် ပြန်ဖော်ချင်တဲ့ဆိုရင် select ပြန်ပေးမယ် unhide. အားလုံး okay သွားပြီ။ G00gle.
How to addaG00gle account?
2. Tap the + button, and then select G00gle.
3, Followthe on-screen instruction to enter your G00gle username and password. အဲ့ဒါလေးတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်နော်။ How to removeaG00gle account?
1. From your device's settings, top other account > G00gle.
2. Select the G00gle account you want to delete. ( if you have more than one G00gle account signed in.)
3. Tap More > Remove account. အဲ့ G00gle account တော့ လွယ်ပါတယ်နော်။
နောက်ပြီးတော့ G00gle play store ။
G00gle installer အားလုံးသိမယ်လိုတော့ထင်တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘာမှ တခြား G00gleနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟာမထဲပါနဲ့။
G00gle services farmework.
G00gle account management.
G00gle play service.
G00gle calendar synchronization service
G00gle contacts synchronization service.
G00gle play store.
အဲ့ဟာတွေအားလုံးကို G00gle installer တစ်ခုထဲနဲ့ အကုန်လုပ်မယ် တခြားဟာတွေနဲ့ ဖုန်းထဲမသိပဲထဲ့ရင် ပြန်လုပ်ရင် အလုပ်ရှုပ်လို့ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ တခြားဟာကနေမထဲဖူး သူတို့ china ကဟာနဲ့အသုံးပြု ရင်တစ်ခါထဲနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။
谷歌注意输入法 အဲ့တော့ 谷歌输入法ရွေးမယ် search နှိပ်မယ်။
G00gle installer ပေါ်လာပြီ သူတို့စာလုံးက
အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ G00gle account ကိုထဲတော့ဗျာ။ အဲ့တော့ ဆွဲချင်တဲ့ဟာ play store ကနေဆွဲဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ ။
error. faceb00k . play store အဲ့ဒါတော့နောက်မှဆက်ပြောမယ်နော်။ Home screen
3. Tap and dragawidget toaHome screen. ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်
Weather (2), notes (2) , calrndar(2), စသည်ဖြင့်ပေါ့ မိမိစိတ်ကြိုက် ထားပြီးသုံးပေါ့နော်။ တကယ်လို့2fingers မသုံးချင်လဲရပါတယ်။
ဒုတိယတန်းထဲက ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးမယ်နောက်အောက်ဆုံး က တစ်ခုထက်ရွေးမယ်။ နှစ်ခုရွေးလိုက်တယ်နော်။ အဲ့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ပြန်ထားမယ်ဆိုရင် ဒုတိယတန်းထဲမှာ လွတ်နေမယ် အဲ့နေရာကို အရင်သွားပါမယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ app တွေကိုနေရာ တခြားစီဖြစ် နေတယ် menu ဖိထားမယ် adjust မလုပ်ချင်ဘူး app တွေ တခြားစီဖြစ်နေရင် drage လုပ်ပြီး စမ်းကြည့် ပါ။ app တွေတစ်နေရာစီ တခြားစီဖြစ်နေမယ်။
ဖုန်းကို ခါလိုက် auto ပြန်စီသွားမယ်ဗျာ။ အဲ့ဒါလေးကလန်းတယ်နော်။ မျက်လုံးထဲရှုပ်နေရင် အဲ့ဒါလေးနဲ့က ပြန်တယ်လေ။ ဟုတ်တယ်နော်။ How to setaprimary home screen?
2. Tap the Home button of the screen you want to make it as primary. အခုဟာတော့ မိမိဖုန်းမှာ ဘယ် pages ကို home screen ထားမလဲ။ လက်ချောင်းသုံးနဲ့ ဆွဲလိုက်မယ် scrren ပေါ်မှာ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ first page မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ How to addahome screen?
3. When your done, tap the back button to exit the editong mode. ဒါကတော့ ကိုယ်သုံးမယ် နောက်ထက် page ထက်တိုးမယ် ။ လွယ်ပါတယ်နော် စမ်းကြည့်ပါ။ How to change the screen transition?
ဒါလေးကတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ သက်ရောက်မှု ပုံစံ ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံ မျိုးကြိုက်လဲ စိတ်ကြိုက် ထားပါ။ How to addaclock to your Home screen?
ဒါကတော့ အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲ ကွန့်ပြီးတော့ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော် ကိုယ်သုံးမဲ့ ဟာပဲသုံးစေချင်တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cpu တွေအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အဲ့အတွက် ဖုန်းလေးတယ်ဗျာ။ လှတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးပေါ့နော်။ game အကြီးတွေ ကစားရင် စကားပြောလာရော။ How addaflashlight on/off button to your Homr screen?
2. Tap widgets > Toggles > Touch. screen ပေါ်မှာထားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမှမထားချင်လဲ lock screen ဖြစ်အောင်တစ်ချက်နှိပ်မယ် ပြန်ဖွင့်မယ် Home key ဖိထားမယ် flashlight လင်းလာမယ် ။
power key နောက်တစ်ကြိမ် နှိပ်ရင် ပိတ်သွားပါမယ် . ================== - ဖုန်းမှာ အဓိက Model နှစ်မျိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ Spec မြင့်သလို ဈေးမြင့်ပါတယ်။ Redmi ကတော့ Spec မြင့်ပေမယ့် ဈေးသက်သာ အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲသည့် နှစ်မျိုးစီမှာ သာမာန်ထက် Screen Size ကြီးတဲ့ Note Serie တစ်မျိုးစီ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Note နဲ့ Redmi Note ဆိုပြီးထပ် ရှိပါတယ်။ Mi , Mi Note, Redmi, Redmi Note ဆိုတဲ့ Model တွေပါ။ Mi Max နဲ့ Mi Mix ကိုတော့ သီးခြား အမျိုးအစားထဲ ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။ - Mi ဖုန်းတွေမှာ Android ကိုအခြေခံထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ MIUI (မီယူအိုင်) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Android မှာပါတဲ့ Function တွေထက်ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Android ကိုအခြေပြုပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ MIUI ဟာ Mi ဖုန်းတွေရဲ့အသက်ပါ။ Android version ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ MIUI ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကို Feature တွေ ၉၉ ရာနှုန်းတူညီအောင် ထောက်ပံ့ပေးထားနိုင်တာမို့ Android Version ဟာ Mi အတွက် ကြီးကြီးမားမားအရေးမကြီးပါဘူး။ MIUI ကိုသာ အမြဲအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။ - MIUI ရဲ့အားသာချက်ကတော့ လိုသလို Customize လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတွေရယ် ကမ္ဘာပေါ်က ထောင်ပေါင်းများစွာသော Developer တွေ Designer တွေကအလုပ်လုပ်ပေးနေပြီး အသစ်အဆန်းတွေ အမြဲ Up to date ဖြစ်နေတာရယ်။ Active ဖြစ်နေပြီး စက္ကန့်နဲ့ အမျှ လေ့လာစရာတွေ တိုးနေတတ်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Forum ကြီးရှိနေတာရယ်။ ဘယ်မော်ဒယ်ကိုသုံးသုံး လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးနီးပါး အတူတူရရှိနိုင်လို့ ကွဲပြားနေတယ် ခွဲခြားထားတယ်လို့ မခံစားရတာရယ် ... - MIUI မှာ China ROM နဲ့ Global ROM ဆိုပြီး အဓိက ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးစီမှာ Developer ROM နဲ့ Stable ROM တစ်ခုစီထပ်ရှိပါတယ်။ Custom ROM ဆိုတာကတော့ MIUI Team ကနေတရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ Developer တွေက သီးသန့် ဖန်တီးထားတဲ့ ROM တွေဖြစ်ပါတယ် Error တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ပိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုမရောထွေးစေဖို့ သတိပြုပါ။ - အရင်က Developer ROM မှာ မြန်မာစာကိုTheme Font နဲ့ အလွယ်လေး ပြောင်းလို့ရပေမယ့် ပေါ်လစီအသစ်ကြောင့် အခု zawgyi ကို Theme font အနေနဲ့ လက်မခံတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် Global ROM မှာ zawgyi တရားဝင်ပါလာပါပြီ။ အလုပ်ရှုပ်မခံချင်ရင် Global ROM ထွက်ပြီးသား Model တွေမှာ Global ROM ကိုတင်ထားတာ မြန်မာစာစိတ်ချရသလို Google ပြသနာလည်းကင်းသွားပါတယ်။ - MIUI7ကစလို့ Mi Account ဟာသိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကနေ ပါဝင်လာပါပြီ။ Mi ဖုန်းသုံးတော့မယ် MIUI ကိုစတင် ထိတွေ့တော့မယ်ဆိုရင် Account ကလုံခြုံရေးအရလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဖုန်းစဝယ်စဉ်မှာ Setting ထဲက Mi Account ကိုကြည့်ပါ။ သူများအကောင့်ဝင်ထားရင် ထွက်ခိုင်းပါ။ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နဲ့သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း တစ်ခါတစ်လေ မေ့လျော့တတ်တာမို့ အကောင့်ကိုပြန်ထွက်ခိုင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူများအကောင့်ကြီးနဲ့ Find Device On ပြီးပါလာရင် ပြသနာသေချာပေါက်တက်မှာပါ - ROM ကိုအခုမှ စပြီး Flash တော့မယ်ဆိုရင်
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို အပြင်မှာ အကူအညီတောင်းပြီး အရင်ဆုံးစမ်းသပ်စေလိုပါတယ်။ Forum တွေမှာမေးတာ၊ Message တွေမှာမေးတာတွေက စလုံးရေစဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ချာချာလည်စေပါတယ်။ ရှည်လျားပြီး အမှားမခံတဲ့ စနစ်တွေကို ရှင်းပြဖို့ အွန်လိုင်းကသင့်တော်တဲ့ communication မဟုတ်ပါ။ - ဖုန်းကို ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပြီး ကလိဖို့ လေ့လာဖို့ မဟုတ်ရင် Root တာကိုအားမပေးပါဘူး။ Root ပြီးတက်တဲ့ ပြသနာက အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ရှိလို့ Online Support တိတိကျကျ ပေးဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်မနိုင်တော့ရင် ဆိုင်ပဲပြေးရပါမယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ လုံခြုံရေးပြသနာလေးတွေ တက်နိုင်ပါတယ်။ သာမာန်သုံးရုံဆို မ Root ပါနဲ့။ Bootloader Unlock မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်မိရင်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်မှာ တာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုင်ကို ပြသနာရှာလို့မရပါ။ - ဘက်ထရီကို တွေ့ကရာ ကြိုးတွေနဲ့ ယူသွင်းတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ဖုန်းပိတ်ကျသွားသည်အထိ မသုံးပါနဲ့၊ ၂၀ အောက်မရောက်သေးပဲ ခဏခဏ Charging သွင်းတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဘက်ထရီမခံတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေဟာ အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ၈၀% ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Quick Charge စနစ်ပါတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် A ပိုမြင့်ပါတယ်။ - ဖုန်းတွေဟာ သုံးနေရင် အနည်းနဲ့ အများ ပူတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သာမာန်ထက်ပိုပူတတ်ပါတယ်။ အားသွင်းထားစဉ် ပူတာမျိုးဆို သတိရှိပါ။ ပလပ်ပြောင်းထိုးပါ နေရာပြောင်းအားသွင်းကြည့်ပါ။ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး အားသွင်းကြည့်ပါ။ အမြဲပူနေရင်တော့ သတိရှိပါစေ။ ရောက်နေတဲ့နေရာက Network လိုင်းတွေအားနည်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဖုန်းကပူလာတတ်တာကို သတိပြုပါ။ အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ ရွေးပြီး ထုတ်နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေသိထားရင် ဆက်ပြီး ဖတ်မှတ် လေ့လာသုံးကြည့်ဖို့ ပိုအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ MI ချစ်​သူများ အားလုံးအဆင်​​ပြေပါ​စေ။ See More
စကားပွောနညျး.... Normal userမြားအတှကျသာ..... #Credit #အိုငျတီရဲသှေး ZawGyi
စကား​ပြောနည်း.... Normal userများအတွက်​သာ.. #Credit #အိုင်​တီရဲ​သွေး See More
Ananda Mifi ရောငျးရနျရှိသညျ
Ph - 09688166776
(( မွောကျဒဂုံ (၅၀)ကှအေ့နီး ))
💛 မြန်​မာ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား​ကောင်း 💛
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 #Link ပျက်​မြန်​​ဒေ ခုပဲ Downကြည့်​ကြ​နော်​ တျဲတို့...😉😉... #ပုံ👇Link ရှိပါ​ဒေ.. See More
Bạn cần thay đổi thông tin Μïñ Ĥțøø Wàí Ýåń?
Trang thơ Tuấn Nguyễn
Thong tin giai tri xa hoi
Thư viện Gấu xám
Công tu Lang Koai
Giải trí cùng Cuoilacuoi.net
Hà Nội – chuyên hàng thanh lý các loại giá cực rẻ